यात्रा अनुभव: चिनियाँ नागरिकसँग अनुहार मिल्दा भोग्नुपरेको समस्या , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यात्रा अनुभव: चिनियाँ नागरिकसँग अनुहार मिल्दा भोग्नुपरेको समस्या
म आफ्नो कोरिया बसाइ अवधि सकेर पूर्वी चाइना एयरलाइन्सबाट नेपाल आउने निधो गरेँ । टिकट पनि अन्य एयरलाइन्सको भन्दा सस्तो भएकोले मार्च १५ तारिकको टिकट लिएँ ।
अब मेरो यात्रा सुरु हुन्छ इन्छन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट सुरुमा थेछिगुम (पेन्सन) लिन कागज पत्र बनाएँ । इमिग्रेशन पास भएपछि डिउटी फ्री मा गएर हेर्दा बैंक बन्द भैसकेको थियो । समस्या यहीँबाट सुरु भयो ।
कोरियादेखि नेपालसम्म पूर्वी चिनियाँ एयरलाइन्समार्फत यात्रा गर्दा भोगेको समस्या र अनुभव चिनियाँसँग अनुहार मिल्नु पनि मेरो लागि अभिशाप नै बन्यो । जब प्लेन उड्यो । केही समय पश्चात् एयर होस्टेस आइन् । उनले भनिन्, ‘चंग चुङ्ग नि हऊ रु’ सायद उसले खान के लिनुहुन्छ रु मैले आफूलाई मन पर्ने परिकारबारे कुरा गर्छु भनेको फेरि उनले भनिन् ‘छ्यांग थुंग चिङ्ग तोंग’ । यति भनिसकेपछि उनी गइन् ।
एकैछिनमा अर्की एयर होस्टेस आइन् सोधिन् ‘चिङ्ग चोङ्ग छुन रु’ उनले केही पिउनुहुन्छ भनेर सोधेजस्तै लाग्यो । मैले कुरा बुझेँ र भनेँ ‘एप्पल जुस’ । उनले उक्त जुस दिइन् । मैले चिनियाँ भाषामा भनेँ ‘से से’ अर्थात् धन्यवाद ।
त्यसपछि केही समय निदाएँ । केहीबेरमा पाइलटले एयरपोर्ट आइपुगेको जानकारी गराए । सबैजना निन्द्राबाट बिउँझिए । बिहान तीन बजेको थियो । एयरपोर्ट ल्याण्ड गरेपछि फेरि एयर होस्टेस मसँग बोलिन् । उनले चिनियाँ भाषामा कुरा गरिन् । तर मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ । यसपटक मलाई उनीसँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो । मैले भनेँ ‘आई एम नट चाइनिज ।’
त्यसपछि उनीसँग मेरो अङ्ग्रेजीमा कुरा भयो र सहज तरिकाले अध्यागमन पार गर्दै होटल जाने तयारीमा लागेँ । यहाँ आफ्नो सबै लगेज बाहिर निकाल्नु पर्ने रहेछ । नेपाल उडानको लागि १३ घण्टा लामो प्रतिक्षा गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि म होटेल गएँ । होटेलमा पनि फेरी उही समस्या एक जना चाईनिजले आफ्नो भाषामा १० मिनेट गफ दियो । सायद उसले आफ्नो होटेलको सुविधाबारेमा जनाकारी गराएको हुनुपर्छ । त्यसपछि मैले आफू चिनीयाँ नागरिक होइन भनेर पासपोर्ट देखाएपछि उ फर्केर गयो ।
उ गएर होटेलमा काम गर्ने एक जना नेपाली दाजुलाई पठाए पछि बल्ल ढुक्क भएँ । नेपाली स्टाफले होटेलको कोठा देखाए । म राती सुते । भोलीपल्ट बिहानै उठे अनि खाना खाएर नेपालको यात्रा तय गरे ।
समग्रमा भन्नु पर्दा मेरो लागि चाईना एयरको त्यो यात्रा त्यति सहज रहेन । चिनियाँ नागरिकसँग अनुहार मिल्दा समस्या पनि झेल्नु पर्यो । सस्तो देखेर टिकट लिँदा दुख पाएँ । हुन् त उहिलेको बुढो पाकाहरुले भन्ने गर्थे ‘बाबु हो धेरै सस्तो चिज खान हुन्न पखाला लाग्छ’ मलाई यो भनाईसँग मेल खाए जस्तो लाग्यो ।